Soo Saarayaasha Farmashiyaha & Warshad - Soosaarayaasha Daawooyinka Shiinaha
Used Waxaa loo adeegsaday guud ahaan warshadaha, dawooyinka, elektaroonigga; ☑ Badeecada waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta aaladaha ceyriinka ah ee dawooyinka cudurka dhimirka, sida fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, iwm. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa aqoonsiga sunta cayayaanka, dila ukunta, caagaga iyo polymerka xarkaha. Uumiga fluorobenzene ee γ - chlorobutyryl chloride ayaa soo saari kara γ ̵ ...
Muuqaalka: Dareeraha hufan Daahsoon: 99.9% min Biyo: 0.03% max Midab (Pt-Co): 10 max Hydrocyanic Acid (mg / kg): 10max Ammonia (mg / kg): 6max Acetone (mg / kg): 25max Acrylonitrile ( mg / kg): 25max Propionitrile (mg / kg): 500max Fe (mg / kg): 0.50max Cu (mg / kg): 0.05max 150kg / durbaan, 12Mt / FCL ama 20mt / FCL UN No.1648, Fasal: 3, Kooxda xirxira: II analysis Falanqaynta kiimikada iyo falanqaynta qalabka. Acetonitrile waa qaabeeye dabiici ah isla markaana dareeraha u ah chromatography lakabka khafiifka ah, chromatography warqad, spectroscopic a ...
☑200kg / durbaan, 16mt / FCL ama taangiga ISO ☑UN No.2929, Fasalka: 6.1, Kooxda xirxira: I ☑ Methyl fluoroacetate waa kiimiko aad sun u ah, oo kicin karta indhaha, habka neefsashada iyo maqaarka, waana khatar in lala xiriiro shilka. Aaladda FLUOROACETIC waa mid ololi karta waxayna soo saari kartaa gaaska hydrogen fluoride, kiimiko sun ah marka la gubo. Sunta sunta methyl fluoroacetate ayaa ah in ay hydrolyze si ay u sameysato FLUOROACETIC acid, oo isku dara coenzyme A ee unugyada mitochondria si ay u sameyso fluoroacetyl CO ...
Aashitada 'Crotonic Acid'
Muuqaalka Midab aan lahayn midabka cystalline ee daahirka ah (GC) 99.0% min Biyo 0.2% max Iron 3ppm max Biraha kale ee culeyska sahamiya 1ppm max 100kg / Fiber drum, 16Mt / FCL UN No.2823, Class: 8, Kooxda xirxira: III ☑ Waa la isticmaalay guud ahaan warshadaha, warshadaha daryeelka shakhsi ahaaneed, warshadaha xarkaha sida lagu daro, warshadaha dhadhanka & udugga. Industry Warshadaha dawooyinka, Waxaa loo adeegsadaa isku-darka (R) -3-Aminobutanol ee anti-HIV API Dolutegravir iyo dhexdhexaadiyaasha API kale, sida Crot ...
Agent Daweynta wakiilka ama xawaaraha dareeraha epoxy; Industry Warshadaha dawooyinka, dhexdhexaadiyeyaasha kale ee API, sida Imazalil, Tioconazole, Bifonazole. Material Walxo cayriin oo sunta cayayaanka loogu talagalay iskudhafka boric acid, diyaarinta cayayaanka iyo bakteeriyada. Ida Imidazole waa shey ceyriin aad muhiim u ah isla markaana dhexdhexaad u ah warshadaha kiimikada wanaagsan, oo leh codsiyo kala duwan. Imidazole kaliya kuma jiro asiidhyada amino acids ee ribonucleic acid iyo deoxyribonucleic acid, laakiin sidoo kale ...
Alyst Kalluumeysiga polyurethane, oo lagu dhejiyay xumbada adag ee polyurethane iyo elastomer si loo dheereeyo nolosha dheriga, xaji falcelinta oo loo kordhiyo cufnaanta ugu dambeysa ee iskutallaabta. CanWaxaa loo isticmaali karaa sidii daawo lagu daaweynayo cusbada epoxy, hagaajinta astaamaha farsamada ee alaabada sida foorarsiga, fidinta iyo riixitaanka, hagaajinta sifooyinka korantada ee dahaarka iyo kiimikada iska caabinta Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa kumbuyuutarrada iyo qalabka korontada; waxaa loo isticmaalaa looxyo wareegsan oo daabacan iyo wareegtooyin isku dhafan sida ...
Muuqaalka: Caddaan cad illaa ku dhowaad cad, Hygroscopic Purity (Titration): 99.0% min Biyo: 1.0% max Toluene: 0.2% wasakh aan la garaneyn: 0.05% ugu guud ahaan nijaasta: 0.2% ugu badnaan qiimaha PH: 11-12.5 25kg / durbaan, 9Mt / FCL Waxyaabaha aan khatarta ahayn ☑ Waxaa loo adeegsaday dawooyinka. C Cyclen iyo waxyaabaha ka dhasha waxay muujinayaan astaamo iskuduwid xulasho oo loogu talagalay cations biraha kala guurka, cations biraha culus, ion lanthanide iyo actinide, iyo xitaa anions ororganic anions. Habdhaqanka saxda ah ee duufaanka iyo ...
Muuqaalka: budada kiristaalo cad cad daahir (Titration): 99.5% min Biyo: 0.5% max [Fe3 +]: 5ppm max [SO4 2]: 10ppm max [Cl]: 10ppm max bir culus: 5ppm max 25kg / durbaan, 9Mt / FCL Aan Maaddada halista ah er Tris buffer-ka loogama isticmaalo oo keliya furfurista asiidhka nucleic iyo borotiinka, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay adeegsiyo badan oo muhiim ah. Tris waxaa loo adeegsaday kobaca kareemka borotiinka ee xaaladaha kala duwan ee pH. Strength Awoodda ionic ee hooseysa ee loo yaqaan 'Tris buffer' ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo fiber-ka dhexdhexaadka ah ee lamin ee C. elegans. ... T ...
Dhex-dhexaadinta isku-dhafka dabiiciga; Qalabaynta Polyurethane ee xumbada adag-adag iyo xumbo adag; ☑ Accelerator for dicyandiamide or anhydride wakilin daaweyn; Milixda ialDialkylimidazolium waxaa lagu heli karaa alkylation of 1-Methylimidazole. Nooca milixdu waxay la xiriirtaa reagent alkylation iyo anion. Dareero badan oo ionic ah ayaa lagu heli karaa falcelintan; ☑N-methylimidazole waa shey ceyriin muhiim u ah isku dhafka daawooyinka dhexdhexaadka ah, kaas oo loo isticmaalo diyaarinta losartan, nitazofenone an ...
2-methyl resorcinol, CAS 608-25-3, CAS 3003-25-2, CAS 453-18-9, Amines, C10-C14-tert-alkyl, (R) -3-Aminobutanol,